सुविधा र स्थापना: रबर टुकडा बाल खेल को मैदानों लागि कवरेज
लैस देश मा छोराछोरीको खेल मैदान वा आफ्नो पिछवाडे मा, विशेष गरी आमाबाबु सकेसम्म सुरक्षित रूपमा खेल एक बच्चा गर्न प्रयास गर्नुहोस्। तर तपाईं चलान, जम्प र लडनु मन नगर्ने छोराछोरी कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? पक्कै! सबै उमेरका बच्चाहरु कार्य खेल, downed घुँडा र चोटपटक गर्न पक्कै नेतृत्व गर्नेछन् जो प्रेम।
छोराछोरीको खेल को मैदानों लागि सही चुनिएको कोटिंग गिरावट तकिया मदत गर्नेछ, र संभवतः गम्भीर चोट लागेको रोक्न। आज हामी जुन थप र थप हाम्रो देशमा लोकप्रिय बन्ने छ नयाँ खेल मैदान, एक उज्ज्वल रबर कोटिंग पालन गर्न सक्नुहुन्छ। यो के हो र यो बच्चाहरु को लागि अहानिकारक छ कसरी? हामीलाई अझ विस्तृत जाँचौं।
यो के हो र यसले के गर्छ?
पुरानो टायर को प्रक्रिया द्वारा उत्पादित गर्दै छन् कि सानो रबर छर्रहरुमा बनेको खेल को मैदानों लागि रबर कोटिंग। सामान्य बालुवा वा पेबल्स संग तुलना यस प्रकारको सकारात्मक विशेषताहरु को एक ठूलो संख्या, र थप कार्यात्मक छ। रबर कवर मा निर्मित गर्दै छल्ले, को रूप रोलिङ र सहज सामाग्री।
टाइल चिसो वा तातो विधि संग granules कम्प्रेस द्वारा निर्मित। भौतिक पर्याप्त लोचदार प्राप्त, तर यो छोराछोरीको सुरक्षाको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ जो कोमलता, गुमाउन छैन। रबर छोराछोरीको खेल को मैदानों लागि कोटिंग यार्ड भर एक निश्चित शैली लीन पत्थर ब्लक, टाइल र जो यो सम्भव बनाउँछ वर्ग, अन्य तत्व संग पूर्ण एक टाइल को रूप मा।
रोल र सहज कवरेज जारी गर्न अनुमति दिन्छ एक बच्चाको कुना बहु-रंग गलैँचा वा हरियो लन को रूप मा। पहिलो embodiment मा, छोराछोरीको कार्टून वर्ण, वा सुन्दर ढाँचाको एक किसिम चित्रण गरिएको सकिन्छ। यसको मोटाई4सेमी, बच्चा को एक कोमल र सुरक्षित आन्दोलन लागि पर्याप्त छ पुग्छ।
यो सामाग्री को लाभ के हुन्?
टुकडा रबर को खेल को मैदानों लागि कवर द्वारा नजिकै मुख्य लाभ समावेश:
- सुन्दर उपस्थिति;
- उत्कृष्ट बल सामाग्री;
- छोराछोरी, जनावर र बिरुवाहरु को सम्बन्ध मा सुरक्षा;
- लामो सेवा जीवन;
- पराबैंगनी विकिरण र कम तापमान प्रतिरोध;
- उत्कृष्ट सामाग्री यो एक मोल्ड गठन गर्दैन, चिस्यान वहन;
- रबर granules मार्फत बढ्दै सामा छैन;
- यस्तो कोटिंग्स मा सूक्ष्मजीवहरु पैदा छैन;
- रबर को वसन्त गुण एक गिरावट को घटना मा बच्चा गर्न चोट minimizes;
- रबर टुकडा बाल खेल को मैदानों लागि कोटिंग पानी सफा गर्न सजिलो छ;
- यो साइट मा हिउँदमा बरफ गठन गर्दैन।
यो पनि कारण सामाग्री को porous संरचना गर्न राम्रो चिस्यान मार्फत बित्दै कि उल्लेख गर्नुपर्छ, र एक बच्चाको खेल मैदान वर्षा पछि चाँडै dries। यो नै गुणस्तर तपाईं पानी सतह मा stagnate गर्दैन रूपमा, पूल नजिकै यसलाई प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ, र बच्चा भिजेको खुट्टा यसलाई मा खुला सार्न सक्छ। सामाग्री को कोमलता बच्चाहरु मा आनन्द र चासो गराउँछ, र तिनीहरूले खिलवाड somersault र यस्तो सतह मा हाम फाल्न खुसी छन्। ढाँचाहरू र उज्ज्वल रंग को एक किसिम indifferent पनि सबैभन्दा जवान अनुसन्धानकर्ताहरूले नछोड। र, सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, आफ्नो आमा भनेर मनपर्ने बच्चा झटका बारेमा, आफ्नो पहिलो कदम बनाउने चिन्ता गर्न सक्दैन।
त्यहाँ रबर कोटिंग्स मा कमीकमजोरी छन्?
अन्य कुनै पनि सामाग्री जस्तै छोराछोरीको खेल को मैदानों ( "चिप्स") को लागि कोटिंग गुणहरू धेरै सुखद छैन को एक नम्बर छ।
भौतिक रीसाइक्लिंग लागि आफ्नो उच्च लागत बारे भन्न पहिलो कुरा। अधिक महंगा सबै सामान्य टाइल वा ठोस आधार, तर स्थायित्व को उच्च डिग्री दिइएको मा रबर कोटिंग को मूल्य, यो यो मूल्य छ, एकदम सम्भव छ।
हामी रबर आगो बारेमा बिर्सनु हुँदैन। 200 डिग्री प्रभाव सामाग्री तापमान पगाल्न सुरु मा, यो सल्काउनुभयो सक्छ। त्यसैले यस्ता साइटहरू नजिकै campfires सिफारिस गरिएको छैन।
छोराछोरीको खेल को मैदानों लागि नरम कोटिंग मात्र ड्राई र न्यानो अवस्थामा राखिएको गर्न सकिन्छ।
हामी आफूलाई यो सतह बनाउन सक्छ?
स्वतन्त्र छोराछोरीको खेल को मैदानों लागि सहज रबर कोटिंग बनाउन सबैलाई महंगा व्यावसायिक मद्दत गर्न resorting बिना आफ्नै हात पाहुना गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्न, तपाईं टुकडा रबर, विशेष polyurethane टास्ने र विलायक पर्छ।
भौतिक खरीद निर्देशित हुनुपर्छ निम्न गणना द्वारा: प्रति 1 मिटर2सतह तह 10 भन्दा बढी सेमी को एक मोटाई मा आवश्यक छ7किलो रबर granules र टास्ने को 1.5 किलो।
सब्सट्रेट सतह संग राम्रो आसंजन लागि प्राइमर गहिरो प्रवेश संग pretreated हुन सक्छ।
कन्टेनर, एक ठोस मिक्सर, एक प्लास्टिक बाल्टिन नाप्ने स्पाटुला, सिलेंडर,: आवश्यक उपकरण को।
यो काम गर्न 10 कम भन्दा डिग्री को एक तापमान मा बाहिर पर्छ भनेर सम्झना गर्नुपर्छ।
सहज रबर कोटिंग प्रविधिको माउन्ट
पहिलो, सतह मिश्रण प्रयोग गर्न तयार हुनुपर्छ। यो अन्त गर्न, सबै विदेशी वस्तुहरु हटाइएका छन् धूलो टाढा बह र स्लट को सबै प्रकार (कुनै छ भने) गंदा।
ध्यान चर्किएको र प्रायजसो खोंच यसलाई दल्नु, आवश्यकता तल मार्फत polyurethane टास्ने को प्रशस्त पत्र पारित गर्न।
मिश्रक माथि संकेत अनुपात मा टुकडा रबर टास्ने संरचना संग मिश्रित छ। परिणामस्वरूप मिश्रण कम्तिमा 1 सेन्टीमिटरको तयार आधार पत्र मा राखिएको थियो र राम्ररी एक स्पाटुला संग पङ्क्तिबद्ध। त्यसपछि intermittently चिसो पानी मा wetted जो कोटिंग रोलर लागि परीक्षण गरे। भनेर पङ्क्तिबद्ध को सतह कडा रोलर मा छैन प्रेस गर्नुपर्छ गर्दा, कम तापमान को प्रभाव अन्तर्गत टूट छैन सञ्चालन टायर समयमा।
काम को समाप्तिमा रबर कोटिंग बारेमा एक दिन को लागि सुक्खामा बाँकी छ। पछि एक सतह यस्तो मा रंगाई रचनाहरूको को माध्यम द्वारा विभिन्न स्वरूपको वा कारण अंकन आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो रंग गुमाउनु छैन खेल को मैदानों लागि ढाक्न, यो एक मैट वार्निश संग उपचार गरिएको छ।
आधुनिक सामाग्री को विशाल विविधता भए तापनि टुकडा रबर को analogs अवस्थित छैन। छोराछोरीको खेल को मैदानों लागि रबर कोटिंग यसको विशिष्टताको र universality द्वारा प्रतिष्ठित छ। आज, यो व्यापारिक केन्द्र, खेल क्लब, खेल को मैदानों, कार्यालय र औद्योगिक परिसर, छ कि, पूर्ण विभिन्न ठाउँमा यो सामाग्री पाउन सकिन्छ वर्षा, उपनगरीय क्षेत्रहरु, र अन्य। आज रबर टुकडा धेरै लोकप्रिय छ, किनभने भन्दा धेरै अधिक छ, जो सकारात्मक गुणहरू को प्रशस्त, कमी उपभोक्ता गरेको ध्यान आकर्षित गर्न विफल हुन सक्दैन।
माउन्ट एक सुविधाजनक तरिका - Drywall लागि Dowel
Milling र उत्कीर्णन मिसिन: विनिर्देशों र छनौट लागि सुझावहरू
घाँटी मा वेन: कसरी छुटकारा प्राप्त गर्न?
कसरी ट्रेक्टर आकर्षित गर्न: चरण निर्देशनहरूको द्वारा चरण
को अंग्रेजी भाषा को व्याकरण के हो?
आफ्नो हातमा देश घर: को सुविधा
Polypropylene बैग को उत्पादन: प्रविधि र उपकरण
बच्चा जन्म लागि वित्तीय सहायता। प्राप्त लागि प्रक्रिया
को खुट्टाको औंलासम्म मा पैदल घण्टी। एक खुट्टाको औंलासम्म मा घन्टी कसरी चयन गर्न
कसरी नेत्रहीन नाक सबै सुधार नेत्रहीन तरिका कम गर्न
"इन्स्टाग्राम"। स्मार्टफोन छैन भने कसरी प्रयोग गर्ने?